သိပ္ပံကဘာလဲ? - ကလေးများများအတွက်အွန်လိုင်းအဘိဓါန်
Home » သိပ္ပံကဘာလဲ?
သိပ္ပံကဘာလဲ? - ရုပ်ပုံစွယ်စုံကျမ်းအဘိဓါန်
ဒါဟာဘဝ, ထိုစကြဝဠာ ... နီးပါးအရာအားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့သော့ကိုကိုင်!
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အာကာသ၏နက်နဲသောအရာမှကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်အရာအားလုံးတက်စေသော tiniest အက်တမ်ကနေအရာကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးလေ့လာတယျ။
သက်ရှိဘယ်လိုရှင်သန်ကြီးထွားသူတို့ကဘယ်မှာနေလဲမရှိဘူး, သူတို့ဘာတွေကိုစားကြဘူး, ဘယ်လိုသူတို့၏အလောင်းများကိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
သင်အပါအဝင် - ဘဝသိပ္ပံအပင်များနှင့်တိရစ္ဆာန်များမှဏုဘက်တီးရီးယားကနေအသက်ရှင်ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ရှာကြံ!
ဒါဟာသိပ္ပံစွမ်းအင်နှင့်တပ်ဖွဲ့များကြည့်ပါတယ်။ အလင်း, အပူ, အသံအပါအဝင်စွမ်းအင်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တပ်ဖွဲ့များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာရာအရပျ၌ရှိသမျှကိုကိုင်သောအမှုအရာဖြစ်ကြ၏။ ဆွဲငင်အား၏အင်အားမရှိရင်ဥပမာ, သငျသညျအာကာသသို့ပယ်ပျံသန်းမညျ!
မြေကြီးတပြင်ဂြိုဟ်နှင့်လ, ကြယ်နဲ့နဂါးငွေ့တန်းနှင့်ပြည့်စုံတစ်ကျယ်ပြန့်ဠာထဲမှာအစက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကသောကွောငျ့အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်ကမ္ဘာမြေအထူးဖြစ်ပါသည်
ဘဝကိုအထောက်အပံ့သာရာအရပျ။ ထိုသို့ကျော်လွန်ရှိကွောငျးအရာအားလုံးကို - မြေကြီးနှင့်အာကာသသိပ္ပံငါတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဠာအက်တမ်များနှင့်ဒြပ်စင်မော်လီကျူး, အရောနှောများနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ပစ္စည်းများသိပ္ပံကျနော်တို့သူတို့ကိုအသုံးချပုံကို, သူတို့ကဘယ်လိုပြုမူသည်ဤအရာများကို၏လေ့လာမှု, သူတို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူတုံ့ပြန်ပုံကို။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား သိပ္ပံ	post navigation